कसरी थाहा पाउन को लागी एक सम्पर्क WhatsApp बाट मेटिएको छ | मोबाइल फोरम
कसरी जान्ने यदि सम्पर्क व्हाट्सएपबाट हटाइएको छ
डेनियल टेरासा | 30/09/2021 15:00 | इन्टरनेट
के तपाइँका सबै साथीहरु र परिचितहरु तपाइँ उनीहरु मा हुनुहुन्छ WhatsApp? के तपाइँ उनीहरुको सम्पर्क सूची मा हुनुहुन्छ? यो प्रयोगकर्ताहरु को गोपनीयता को उल्ल without्घन बिना यो प्रश्न को जवाफ असम्भव छ। यो सबै भरोसा को एक मात्र प्रश्न मा आउँछ। तर सत्य हो हो त्यहाँ एक तरीका थाहा छ यदि एक सम्पर्क WhatsApp बाट मेटिएको छ। त्यो हामी आज पत्ता लगाउन जाँदैछौं।
व्हाट्सएप र तत्काल सन्देश अनुप्रयोगहरु को बाकी सधैं को लागी हामी संचार तरीका मा क्रान्ति ल्याईएको छ। र न केवल हाम्रा साथीहरु र परिचितहरु संग। वास्तव मा, यो पहिले नै लगभग सबै क्षेत्रहरु मा प्रयोग गरीन्छ, पनी काम वा पेशेवर मुद्दाहरु को लागी। सिद्धान्त मा, यी सबै हाम्रो जीवन सजिलो बनाउनु पर्छ। जे होस्, कहिले काँही व्हाट्सएप पनि द्वन्द्व को एक स्रोत हुन सक्छ।
ती मध्ये एक यो हुन सक्छ। र पक्कै त्यो सबै संग हुन्छ वा केहि समय मा भएको छ: हामी विश्वास गर्छौं कि हामी एक व्यक्तिको सम्पर्क सूची मा छौं कि हामी एक साथी को रूप मा छौ, वा कोहि एक कम वा कम महत्वपूर्ण प्रश्न को लागी हामीलाई सम्पर्क गर्न को लागी (एक नियुक्ति वा एक नौकरी साक्षात्कार, उदाहरण को लागी)। तर त्यो कल वा त्यो सन्देश आउँदैन। र यो कहिल्यै आउँदैन किनकि हामी उनीहरुको सूचीमा पनि छैनौं।
तर यो मात्र यसको बारेमा छैन। जब एक व्यक्ति हामीलाई आफ्नो व्हाट्सएप सम्पर्क बाट हटाउँछ, त्यहाँ केहि जानकारी छ कि लुकेको रहनेछ र पहुँच गर्न सकिदैन जब सम्म हामी फेरि जोडिदैनौं।
पत्ता लगाउनुहोस् कि हामी कसैको सूची बाट हटाइएको छ यो निराशाजनक हुन सक्छ। एक सम्पर्क मेटाउने निर्णय एक तर्क वा असहमति पछि आउन सक्छ। ती अवस्थाहरुमा, उन्मूलन लामो समय सम्म रहन्छ जब सम्म मेलमिलाप हुन्छ। अन्य पटक यो गरिन्छ किनभने व्यक्ति जसले हामीलाई हटाउँछ सोच्दछ कि हामी उनीहरु को लागी कुनै चासो छैन।
1 के हाम्रो सम्पर्क मेटिएको छ? ट्रिक्स जान्न को लागी
1.2 प्रोफाईल फोटो
1.3 पछिल्लो जडान समय
2 WhatsApp मा सम्पर्क ब्लक
2.1 अनलक पछि
3 कसरी WhatsApp मा एक सम्पर्क मेटाउने?
के हाम्रो सम्पर्क मेटिएको छ? ट्रिक्स जान्न को लागी
अन्य सामाजिक सञ्जाल जस्तै इन्स्टाग्राम वा फेसबुक को विपरीत, व्हाट्सएपले हामीलाई सूचित गर्दैन यदि हामी मेटाइएको छ वा कसै द्वारा मेटाइएको छ। तर त्यहाँ निश्चित छन् चालहरू जान्न…
यहाँ पहिलो सुराग हो कि हामीलाई मद्दत गर्न को लागी यदि एक सम्पर्क WhatsApp बाट मेटिएको छ। धेरै पटक प्रयोगकर्ताहरु लाई तय छ कि मात्र साथीहरु जो अनुसूचित छन् आफ्नो स्थिति देख्न सक्छन्। यी अवस्थामा, यदि हामी उनीहरुलाई देख्न सक्दैनौं, यो सम्भवतः किनभने हामी अब तपाइँको सूची मा छैनौं।
यो थाहा पाउने अर्को तरीका हो कि कसैले हामीलाई आफ्नो व्हाट्सएप सूची बाट हटाएको छ उनीहरुको प्रोफाइल तस्वीर को माध्यम बाट। यदि एक साथी, रिश्तेदार, छिमेकी, सहकर्मी कि हामी अनुप्रयोग मा थपेको छ एक प्रोफाईल फोटो बिना देखिन्छ, यो धेरै सम्भव छ कि उनीहरुले हामीलाई उनीहरुको सम्पर्क बाट हटाएका छन्। यद्यपि त्यहाँ सम्भावना पनि छ, सम्भव छैन, कि उसले प्रोफाईल नहुने निर्णय गरेको छ। सबै कुरा सम्भव छ।
पछिल्लो जडान समय
यो एक मूर्ख चाल छैन, तर यो चाल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि एक सम्पर्क WhatsApp बाट मेटिएको छ, पछिल्लो जडान समय को बारे मा जानकारी प्रदर्शित हुने छैन। के हुन्छ यो हो कि यो अनुप्रयोग को धेरै प्रयोगकर्ताहरु लाई यो जानकारी देखाउन को लागी विकल्प को उपयोग गर्दछ, त्यसैले यो विधि सधैं सही स्थिति प्रकट गर्दैन।
एक अन्तिम परीक्षण कि कोसिस गर्न सकिन्छ कि सम्पर्क गर्न को लागी एक समूह जोड्ने को सूची बाट तपाइँलाई शंका छ कि उनीहरुलाई हटाइएको छ। यदि संयोगले त्यो व्यक्ति "अपरिचितहरु बाट समूह आमन्त्रित गर्न प्रतिबन्ध" विकल्प छ, फैसला स्पष्ट छ।
WhatsApp मा सम्पर्क ब्लक
व्हाट्सएप मा ब्लक सम्पर्क (र ब्लक प्राप्त)
माथिको सबै जान्ने को सवाल लाई बुझाउँछ यदि एक सम्पर्क WhatsApp बाट हटाइएको छ। भएको अवस्थामा लक आउट, कुरा जटिल छ। तब के हुन्छ?
सुरु गर्न को लागी, जब यो सबै हुन्छ WhatsApp को माध्यम बाट अवरुद्ध सम्पर्क संग सीधा संचार असम्भव हुनेछ। यदि हामी प्रयोगकर्ता जो हामीलाई रोकिएको छ सन्देश पठाउन को लागी, उनीहरु आफ्नो गन्तव्य कहिल्यै पुग्न सक्दैनन्। यो भनिएको छ कि उस्तै तरीकाले अन्य प्रयोगकर्ताले हामीलाई केहि पनी पठाउन सक्षम हुनेछैन। एउटै कल मा लागू हुन्छ।
एक अवरुद्ध सम्पर्क को रूप मा, हामी पनि स्थिति को बारे मा जानकारी को उपयोग गर्न को लागी सक्षम हुनेछैनौं प्रयोगकर्ता को जो हामी मा ब्लक लगाएको छ। प्रोफाइल फोटो को साथ मा यस्तै हुनेछ। यसको सट्टा, एक सेतो सिल्हूट एक ग्रे पृष्ठभूमि मा पूर्वनिर्धारित द्वारा देखा पर्नेछ।
न त सक्छ पछिल्लो जडान समय थाहा छ जसले हामीलाई रोकिएको छ, वा यदि उनीहरु अनलाइन छन् वा छैनन्।
यदि, जुनसुकै कारणको लागी, सम्पर्क जसले हामीलाई अवरुद्ध गरेको छ उनीहरुको दिमाग परिवर्तन गर्दछ र ब्लक उठाउने निर्णय गर्दछ, लगभग सबै कुरा हुनेछ सामान्यमा फिर्ता। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, व्हाट्सएप कल र सन्देश यातायात स्वचालित रूप बाट पुनः प्राप्त हुनेछ। निस्सन्देह, पठाइएका सन्देशहरु र कलहरु तालाबन्दी को अवधि को दौरान बनाईएको अपरिवर्तनीय हराउने छ।
कसरी WhatsApp मा एक सम्पर्क मेटाउने?
अब एक पल को लागी अर्को पक्ष मा प्राप्त गरौं। चलो कल्पना गर्नुहोस् कि हामी हौं जो हाम्रो व्हाट्सएप सम्पर्क सूची बाट एक नम्बर हटाउन चाहन्छौं। त्यहाँ के गर्ने? यी अनुसरण गर्नका लागि यी चरणहरू छन्:
पहिले हामी अनुप्रयोग खोल्नेछौं WhatsApp र हामी ट्याबमा जानेछौं कुराकानी।
त्यसपछि हामी को लागी खेल्नेछौं नयाँ च्याट खोल्नुहोस्।
हामी को लागी हेर्छौं सम्पर्क कि हामी मेटाउन चाहन्छौं र यसमा क्लिक गर्नुहोस्।
पछ्याउने मार्ग निम्न छ: "अधिक विकल्प"पछि, "सम्पर्क पुस्तक मा हेर्नुहोस्", त्यहाँ चयन गर्नुहोस् "अधिक विकल्प" र अन्तमा क्लिक गर्नुहोस् "हटाउनुहोस्"।
हटाउन को लागी पूरा हुन को लागी, सूची अपडेट गर्न नबिर्सनुहोस्।
च्याट विन्डो बाट, हामी सम्पर्क मा क्लिक गर्नेछौं कि हामी मेटाउन चाहन्छौं।
यो सम्पर्क जानकारी ल्याउनेछ। हामी प्रेस "सम्पादन गर्नुहोस्", स्क्रिनको माथिल्लो दायाँ कुनामा।
त्यसपछि आवेदन खुल्छ "तपाइँको आईफोन बाट सम्पर्क"। त्यो हो जहाँ हामी थिच्नु पर्छ "सम्पर्क मेटाउनुहोस्"।
यस प्रकार, हामी द्वारा मेटिएको सम्पर्क कुनै चेतावनी वा सूचना प्राप्त हुने छैन। यो पत्ता लगाउने एक मात्र तरीका छ कि तपाइँ हाम्रो सम्पर्क सूची बाट हटाइएको छ यो पोस्ट मा व्याख्या गरिएका चरणहरु को पालन गरेर हो। यो स्पष्ट हुनुपर्दछ कि, जे होस् हामी विवेकशील हुन को लागी, ढिलो वा पछि यो थाहा हुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » इन्टरनेट » कसरी जान्ने यदि सम्पर्क व्हाट्सएपबाट हटाइएको छ